’शत्रु गते’ पोस्टरमा जोडी तीन, मन पर्यो कुन ? « Ramailo छ
’शत्रु गते’ पोस्टरमा जोडी तीन, मन पर्यो कुन ?
चैत ९ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ’शत्रु गते’ को पोष्टर सार्वजनिक गरिएको छ । टौवा क्रियशनका लागि विजय बस्यालले तयार गरेका सार्वजनिक चार पोष्टर आकर्षक छन् । पोष्टरमा मुख्यतः हरिवंश आचार्य र दीपाश्री निरौला, दीपकराज गिरी र प्रियंका कार्की तथा पल शाह र आंचल शर्माको जोडीलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
फिल्मको अर्को एक पोस्टरमा फिल्मका सबै मुख्य पात्रहरु प्रस्तुत छन् । ‘रुपै मोहनी’ गीत रिलिजसँगै चर्चामा रहेका ‘शत्रु गते’को पोस्टरबाट फिल्म पारिवारिक प्रेम कथामा बनेको बुझ्न सकिन्छ । दिपकराज र प्रियंकाको जोडी भने चोर पुलिसको जोडी हुन सक्ने अड्कल पोस्टरबाट झल्किन्छ ।
यता निर्देशक प्रदीप भट्टराई पनि फिल्मको थिम अनुसार नै पोस्टर तयार गरिएको बताउँछन् । पोस्टरका लागि श्रीधर पौडेलको फोटोग्राफी छ । टंक बुढाथोकीको संगीत रहेको ‘रुपै मोहनी’ लाई ९४ लाख पटक हेरिंदा फिल्मको अर्को गीत पिरतीको बर्कोलाई पनि दर्शक तथा श्रोताले रुचाएका छन् ।
मल्टिस्टारकास्ट र गीत संगीतको चर्चासँगै ‘शत्रु गते’ यस वर्षको प्रतिक्षित फिल्मको तालिकामा पर्न आएको छ । मह सञ्चारको प्रस्तुतीमा किरण केसीले निर्माण गरेको शत्रु गते मा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, किरण केसी, शिवहरी पौडेलको पनि अभिनय छ ।